कोइलाबासलाई ब्यावसायिक हव बनाउन सबै उद्योग वाणिज्य संघहरु जाग्नुपर्छ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / कोइलाबासलाई ब्यावसायिक हव बनाउन सबै उद्योग वाणिज्य संघहरु जाग्नुपर्छ
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता June 15, 2018	0 174 Views
अध्यक्ष गढवा उद्योग वाणिज्य संघ
गढवा उद्यो ग वाणिज्य संघले यही जे ठ १२ का दिन दाङ जिल्लाका उद्यो ग वाणिज्य संघहरुलाई एउटै थलो मा भे ला गराउन सफल भएको छ । जिल्लाको ओ झे लमा परे को ब्यापारिक नाका को इलाबासमा अन्तत्र्रिmया गरी त्यहाँका समस् या बुझे र पर्यटकीयस् थल जंगलकुटीमा पुगी बृहत छलफल र मन्थन साथ १३ बुँदे साझा घो षणापत्र समे त जारी गरे को छ । प्रस्तुत छ, ऐ तिहासिक अभ्यासको थालनीमा पहल गनेर् गढवा उद्यो ग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रविलाल आचार्यसग युगबो धकर्मी शिवराज पन्थीले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प –सम्पादक
जिल्लाका उद्यो ग वाणिज्य संघहरुलाई एकै थलो मा जुटाउनुभयो  । निष्कर्ष के निस् िकयो त ?
जिल्लाका उद्यो ग वाणिज्य संघहरुलाई एकै थलो मा जुटाउने अवसर प्राप्त भएको मा सबै उद्यो ग वाणिज्य संघहरुप्रति कृतज्ञ छौ ं । यो दाङ जिल्लाका लागि नया“ सूत्रधार हो  । छल गरे र निस् िकएको फललाई छलफल भनिन्छ । हामीले कसै लाई नछले र बृहत मन्थनका साथ आम ब्यवसायीहरुको हक, हित, अधिकार र न्यायका लागि मीठो फल निकाले का छौ ं । त्यही नै हो – १३ बु“दे जंगलकुटी घो षणापत्र ।
तपाइ उद्यो गी ब्यवसायीहरुको हक, हितमा लागे को कति समय भयो ?
करिब १५ वर्ष भयो  । नौ वर्ष अघि दे उखुरी उद्यो ग वाणिज्य संघको कार्यसमितिमा रहे र एक कार्यकाल काम गरे ं । जुनबे ला गढवाका व्यवसायीहरु पनि त्यहीं आवद्ध थिए । त्यसपछि २०७० मा दाङ जिल्ला उद्यो ग वाणिज्य संघबाट सम्बन्धन प्राप्त गरी गढवामा उद्यो ग वाणिज्य संघ स् थापना भएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर काम गरिरहे ं । अहिले आमाको पे टमा भएको बच्चा जन्मिने समय भयो  । गढवा उद्यो ग वाणिज्य संघको ने तृत्वमा आएको  ।
को इलाबास नाकालाई पहिले कै स् िथतिमा फर्काएर ब्यावसायिक हव बनाउन दाङका उद्यो ग वाणिज्य संघहरुको के भूमिका हुनसक्छ ?
को इलाबासलाई जिल्लाकै ब्यापारिक के न्द्र अर्थात ब्यावसायिक हव बनाउन दाङका सबै उद्यो ग वाणिज्य संघहरु सशक्तढंगले जाग्नुपर्छ । समग्र दाङ दे उखुरीको औ द्यो गिक विकास, ब्यावसायिक एकता, अवसर र चुनौ ती सबै को पहिचान गरे र सशक्तढंगले सरकारका अंगहरुस“ग समन्वयकारी भूमिकामा रहे र अगाडि बढे मा को इलाबासलाई राप्ती अञ्चलकै ब्यावसायिक हव बनाउन सकिन्छ । यसमा निजी क्षे त्रको ठूलो भूमिका रहन्छ । राष्ट्रको ठूलो अर्थतन्त्र निजी क्षे त्रबाट थामिएको छ । कार्यक्रमको थालनी नै को इलाबासबाट शुरु गरे का छौ ं ।
निर्माणाधीन लमही को इलाबास सडक निर्माणपश्चात् राणाकालमा ने पालकै दो स्रो र पञ्चायतकालमा ने पालकै चौ थो ठूलो कारो वार भएको इतिहास बो के को भन्सार कार्यालयलाई पहिले कै अवस् थामा ल्याउन हामी ब्यावसायिक संगठनहरुले अहं भूमिका निर्वाह गनेर् यो जना बनाएका छौ ं । भारत सरकारका सम्बन्धित निकायहरु र ब्यापार संघहरुस“ग समन्वय सहकार्य गरे र सामानहरुको आयात निर्यात, निकासी पै ठारी र यात्रुहरु तथा पर्यटकहरुको आवागमनलाई प्रभावकारिता दिन र को इलाबासमा खाने पानी, शिक्षा, स् वास् थ्य, सञ्चार, पर्यापर्यटन, मन्दिर, पाटी पौ वा नाका क्षे त्रका सडक ब्यवस् थापन र ब्यापारब्यवसाय सबै को समुचित ब्यवस् थापन गर्न गराउन ने पाल सरकारका सम्वन्धित निकायहरुलाई समे त साथ दिने र आवश्यक परे घच्घच्याउने काम हाम्रो भूमिकामा रहने छ ।
दाङ जिल्लामा उद्यो ग वाणिज्य संघहरु एकै थलो मा जुटे र साझा एजे ण्डा बनाएको यो पहिलो पटक जस् तो लाग्छ, तपाइले कुन सूत्र प्रयो ग गर्नुभयो त ?
मलाई पनि त्यस् तै लाग्छ । अहिले निकै राम्रो समन्वय भएको छ । म गढवाको ने तृत्वमा आएपछि सो च बनाइरहे को थिए ।
संयोग कस्तो भयो भने । के न्द्र सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, अर्थसचिवलगायत विशिष्ट ब्यक्तित्वहरुको उपस् िथतिमा भै रहवामा भएको ५ नं. प्रदे शभरका उद्यो ग वाणिज्य संघका ने ताहरुको समुपस् िथतिको अन्तत्र्रिmया सन्दर्भ साइत बन्यो  । त्यही कार्यक्रममा भाग लिई दाङ फर्किदै गर्दा कालाकाटे मा भएको चियागफमा दाङ जिल्ला उद्यो ग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण भुसाल, दे उखुरी उद्यो ग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रत्नप्रसाद श्रे ष्ठ र राप्ती उद्यो ग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जगत पो खे ्रललगायतका साथीहरुबीच यस् तो कार्यक्रम राख्ने बारे छलफल भयो र यो जना बन्यो  । त्यसै अनुरुप पहिलो कार्यक्रम हाम्रो आग्रहमा राख्न पाएका हौ ं । बीज गणितको जस् तो सूत्र त प्रयो ग भएको हो इन, हाम्रो अनुरो धलाई स् वीकार गरे र उपस् िथत हुनुहुने जिल्लाका सबै उद्यो ग वाणिज्य संघहरुप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौ ं ।
१३ बुदे जंगलकुटी घो षणापत्र कार्यान्वयन हो ला त ?
जायज कुरा सो ध्नु भो । एउटा आत्मा छ । त्यो आत्मालाई रुवाउने हसाउने तिम्रै हातमा छ भने जस् तै कार्यान्वयन गनेर् विषय जिल्लाका सबै उद्यो ग वाणिज्य संघहरुको हातमा छ । व्यवसायीहरुस“गका प्रत्यक्ष सरो कारका विषय भएको र जिल्लाभरका सबै उद्यो ग वाणिज्य संघहरुको यसमा एकमत रहे को हुदा यो १३ बुदे घो षणपत्रका बु“दा कार्यान्वयन गर्न हालको वास् तविक आवश्यकता हामीले ठाने का छौ ं । सबै ले आ–आफ्नो क्षे त्रबाट कार्यान्वयनका लागि जो डदार पहल गर्न जरुरी छ ।
व्यावसायिक हक हितको लागि नया कार्यक्रम के सो च्नु भएको छ ।यस क्षे त्रका सबै ब्यवसायीहरुलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याई उद्यो ग वाणिज्य संघ र सरकारी करको दायरामा ल्याई अनुशासित, मर्यादितढंगले ब्यवसाय सञ्चालन गर्न गराउन र भविष्यमा राज्यका विभिन्न निकायहरुस“ग समन्वय गरी ब्यावसायिक हकहितको लागि से वा विस् तार गनेर् र ब्यवसायीहरुका पिरमर्काहरुलाई ब्यवसायीहरुबाटै खो जतलास गरी साझा पहल गरे र निकास निकाल्ने हाम्रो सो च छ । यसका साथै ब्यवसायीहरुको क्षमता विकासका लागि विभिन्नखाले तालिम, गो ष्ठी, आयो जना गनेर् , ब्यवस् िथतढंगले ले खा राख्न सिकाउने र जिल्लाभरका ब्यावसायिक संगठनहरुबीच एकै खालको नीति कार्यक्रम बनाएर ब्यवसायीहरुलाई सर्वसुलभढंगले से वा प्रवाह गनेर् तथा ब्यवसायीहरुलाई परे का अप्ठ्याराहरुमा एकाकार भएर साथ दिने हाम्रो सो च हो  ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालयले स् थलगत से वा दिएको राम्रो मानिन्थ्यो तर अभिले ख ब्यवस् िथत नहुदा ब्यवसायीहरुले दुःख पाएको भन्ने सुनिन्छ । वास्तविकता के हो ?
आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट डो र खटि आएर जिल्लाका विभिन्न ठाउ“मा राजश्व बुझ्ने काम भएको छ । त्यो स् वागतयो ग्य कार्य हो  । तर सो कार्यालयमा ब्यावसायिक फर्महरुको सम्पूर्ण पुरानो विवरण कम्प्यूटरमा अभिले खीकरण नभएका कारण पुरानो बक्यौ ता दे खाउने गरे का कारण ब्यवसायीहरुलाई असहज भएको स् वाभाविक हो  । हामी आग्रह गर्न चाहन्छौ ं दर्ता भएका सम्पूर्ण ब्यवसायीहरुको पुरानो रे कर्डलाई अद्यावधिक गरी आगामी वर्षदे खि स् थानीय तहमा कर बुझ्ने स् थलबाटै कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समे त दिने ब्यवस् था हो स् । यसका लागि आवश्यक इन्टरने टको ब्यवस् था हामीले गनेर् छौ ं ।
तपाइ काठको कारो वार गनेर् ब्यापारी हो  । यसको कारो वार गनेर् ब्यापारीलाई हे नेर् दृष्टिको ण त अलिक फरक पाइन्छ नि ?
हो , म लामो समयदे खि फर्निचर ब्यवसायमा आबद्ध छु । काष्ठ ब्यवसायीलाई हे नेर् दृष्टिको ण कतिपय मान्छे को फरक पाइन्छ । मानिस जन्मदा दे खि मर्दासम्म हरे क समयमा काठको आवश्यकता पर्छ । के ही मान्छे हरुले बदमासी गरे भन्दै मा काष्ठ ब्यवसायीहरुलाई हे नेर् दृष्टिको णमा फरक को ण राख्न मिल्दै न । मे रो बिषयमा सबै लाई विदितै छ । म सामाजिक हिसाबले बा“च्न चाहने मान्छे हो  । यसर्थ पनि हामीले गै रकानुनीढंगले काम गरे नौ ं भने हे नेर् दृष्टिको णमा परिवर्तन हुन्छ । म सबै लाई यही आग्रह गर्न चाहन्छु ।
संघीयताको कार्यान्वयनस“गै ब्यवसायीहरु दो हो रो करको चपे टामा पदैर् छन् भन्ने सुनिन्छ, वास् तविकता के हो  ?
स् थानीय, प्रदे श र के न्द्र सरकारले आयो जना गरे का राजश्व परामर्श सम्वन्धी कार्यक्रमहरुमा हामीले जो डदारढंगले दो हो रो करको चपे टामा ब्यवसायीहरुलाई पार्नुह“ुदै न भन्ने आवाज उठाइरहे का छौ ं । राज्यका निकायहरुबाट समे त यस् तो हुने छै न भन्ने आश्वासन आएको छ । यो विषयलाई राज्यले गम्भीरढंगले सो च्नै पर्छ, यदि दो हो रो कर लादियो नै भने हामी ब्याविसायिक संगठनहरु एकाकार भएर आन्दो लित हुन बाध्य हुने छौ ं ।
दाङलाई प्रादे शिक राजधानी बनाउने विषयमा जिल्लाका सबै उद्यो ग वाणिज्य संघहरुले पहल गरे तर अन्त्यमा राजनीतिक दलले आन्दो लनलाई तुहाइदिए भनिन्छ । यो विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
सबै दङाली जनतालाई अवगत नै छ, प्रादे शिक राजधानी दाङ दे उखुरीमा बनाउने विषयमा आन्दो लनको शुरुवात नै जिल्लास् िथत उद्यो ग वाणिज्य संघहरुबाटै भएको हो  । सबै ब्यवसायीहरुले आ–आफ्ना उद्यो ग ब्यवसाय बन्द गरे र आन्दो लनलाई पूर्ण साथ पनि दिएकै हुन् । जब–जब आन्दो लन उत्कर्षमा पुग्यो राजनीतिक दलहरुले ने तृत्व लिने गरी आन्दो लनलाई अगाडि बढाउने भनी नाटक गरियो र आन्दो लन बीचमै तुहाइयो  ।
यो राजनीतिक दलहरुको ठूलो कमजो री हो  । यसले निकट भविष्यसम्म कसलाई कहाने र प्रहार गनेर् छ, जनताले इख राखे का छन् । कसै को त राजनीतिक जीवन नै समाप्त हुने छ, हे दैर्
जानुस् । त्यो भविष्यले नै स् पष्ट गनेर् छ । तथापि हामी अझै पनि स्थायी राजधानी दाङ दे उखुरीमै हुनुपर्छ भन्ने विषयमा जस् तो सुकै आन्दो लन गर्न पनि तयार छौ ं । हाम्रो घो षणापत्रमा नै उल्लेख भएको बुदा हो  । संघीयताको मर्म बमो जिम सबै लाई पायक पनेर् ठाउ वा के न्द्रमा राजधानी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो  । ने ताहरुको बुद्धि फिरे मा दाङमै राजधानी हुने छ ।
अझै पनि ने ताहरु भन्ने गर्छन्, दाङ दे उखुरीमै ५ नं. प्रदे े शको स् थायी राजधानी बन्छ, के यो सम्भव छ ?
यदि राजनीतिक ने तृत्वले न्यायिकढंगले सो चे र अन्तरआत्माबाटै भौ गो लिक पूर्वाग्रह नराख्ने हो भने ५ नं. प्रदे शको राजधानी दाङ दे उखुरीबाहे क अनेत्र छै न । यसमा सबै राजनीतिक दल, उद्यो गी ब्यवसायी संगठनहरु, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज र आम नागरिकहरुको भूमिका हुनुपर्छ ।
आफ्नो व्यवसायमा निकै ब्यस् त रहे र पनि तपाइ गढवा उद्यो ग वाणिज्य संघको ने तृत्वमा आएपछि नया–नया काम गर्न खो ज्नुभएको छ । यसमा को कसको साथ छ ?
]ब्यस्त रहो , मस् त रहो , स् वस् थ्य रहो भने झै ं ब्यस् त रहनु स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदा हो  । ने तृत्वमा आइसके पछि
ब्यस् तताका बावजुद पनि आफूले सके सम्म सिर्जनात्मक काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । के ही काम कार्यान्वयन भए हो लान् । के ही बाकी हो लान् सबै काम सफल पार्न टिमवर्क मिल्नु पर्छ । एक्लै ले के ही गर्न सकिन्न । मलाई सहयो ग गर्नुहुने स्थानीय राजनीतिक दलहरु, संघका सल्लाहकारहरु, पदाधिकारीहरु तथा ब्यवसायी मित्रहरु सबै बाट सहयो ग र साथ छ । सुनमा सुगन्ध भने झै ं जिल्लाका सबै उद्यो ग वाणिज्य संघका साथीहरुले पनि थप उर्जा दिनुभएको छ । घरपरिवारको पनि उत्तिकै साथ छ । सबै प्रति कृतज्ञ छु ।
राजश्व छले र गाउ–गाउमा ब्यापार गनेर् मान्छे हरु थुप्रै छन् । यिनीहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
गाउ“घरमा अझै पनि बिनादर्ताका पसलहरु तथा राजश्व छले र ल्याएका सामान बिक्री गनेर् घुमन्ते झो ले कुम्ले ब्यापारी नभएका हो इनन् । यस् ता ब्यापारीलाई सरकारी करको दायरामा आउन आव्हान गर्छु । ब्यवसाय गनेर् सबै को अधिकार छ तर राजश्व छले र ब्यापार गनेर् अधिकार भने कसै लाई छै न । हामी जिल्लाका सबै उद्यो ग वाणिज्य संघहरुले यो समस् या हल गर्न घो षणपत्रमै नीति बनाएका छौ ं  । स् थानीय सरकारलाई पनि गम्भीर भएर यो विषयलाई चा“सो दिन हामी आग्रह गर्दछौ ं ।
अन्त्यमा यस पत्रिकामार्फत थप के ही भन्नुहुन्छ ?
सर्वप्रथम युगबो ध राष्ट्रिय दै निक पत्रिकामा हामी र हाम्रो उद्यो ग वाणिज्य संघका बिचार प्रकाशन गनेर् अवसर प्रदान गर्नुभयो , यसप्रति हार्दिक कृतज्ञता साथ आभार ब्यक्त गर्दछु । हाम्रो उद्यो ग वाणिज्य संघ अन्तर्गतका सबै ब्यवसायीहरुले आफूलाई परे का समस् या औ ंल्याउनुहो ला । साथै करको दायरामा आएर ब्यवसाय दर्ता गरे र मात्र मर्यादितढंगले ब्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुरो ध गर्दछौ ं । दर्ता नगरे रै ब्यवसाय गनेर् लाई करको दायरामा ल्याउनु पनि हाम्रो दायित्व हो  ।
Previous: राप्तीमा वस्तीबाटै योजना छनोट शुरु
Next: कृषि उत्पादन बढाउने कुरा